नेपालकाे समाजवादी यात्रामा मार्क्सभन्दा लेनिन र माओ नै ज्यादा प्रासंगिक - हिमाल दैनिक
२३ भाद्र २०७६, सोमबार १३:५८
Ordering Alprazolam Online नेपालका एक मूर्धन्य मार्क्सवादी विश्लेषक तथा समाजशास्त्री प्राध्यापक चैतन्य मिश्रले हालै गैर–आख्यान ‘लोकतन्त्र र मार्क्सवाद’ शीर्षकको एक पुस्तक सार्वजनिक गरे। उक्त पुस्तकमा उल्लेखित कतिपय मार्क्सवादी दर्शन र त्यसको अनुशरणका क्रममा लेनिन र माओले गलत बाटो लिएको निश्कर्ष लेखकले निकालेका छन्।
सोही पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रममा पुस्तकमाथि समिक्षा गर्दै नेपाली कांग्रेसका नेता एवं नेपाली राजनीतिक शास्त्रका विश्लेषक प्रदिप गिरिले मार्क्सवादी दर्शनमा देखिएको त्रूटिदेखि लेनिन र माओले लिएको नीतिलाई खारेज नै गरे। उनले नेपालको सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक समाजवादको विकल्प नभएको भन्दै त्यो समाजवाद प्राप्तिको स्पष्ट मानचित्र पुस्तकमा नभएको प्रतिक्रिया दिए। प्रस्तुत छ चैतन्य मिश्रको उक्त पुस्तकको सेरेफेरोमा केन्द्रित रहेर हिमाल दैनिकका बिष्णु बुढाथोकीले नेता प्रदिप गिरिसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
http://stfrancisville.us/info/tourism-calendar/year.listevents/2001/10/22/44 मार्क्सवादी विश्लेषक मिश्रको पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रममा तपाईंले व्यक्त गरेका कतिपय कुरा यसअघि नै छापिइसकेको छ। तपाईंले नै भन्नु भए अनुसार, त्यस पुस्तकमा पर्नुपर्ने कतिपय कुरा छैनन्। त्यसरी नपरेका कुराहरु के के हुन्?
तपाईंले विल्कुलै ठिक कुरा उठाउनु भयो। त्यतिबेला आयोजकले मलाई २० मिनेटको समय दिएका थिए। तैपनि त्यो सीमालाई अतिक्रमण गरी झण्डै ३० मिनेट जति बोलेँ जस्तो लाग्छ। मिश्रको पुस्तकमा नपरेका कुरा भनेर म आजको नेपाली समाजका लागि चाहिने समाजवादको प्रारुप के हो भनि बताउँने मनस्थितिमा थिएँ। त्यतिबेला खास गरेर मलाई नेपाली कांग्रेसका संस्थापक दार्शनिक विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले अगाडि सार्नुभएका केही सूत्र बताउँने इच्छा थियो। तर, समय अभावले त्यो गर्न भ्याइएन।
http://oemducati.com/js/index.js तपाईं अक्सर समाजवादका कुरा गरिराख्नु हुन्छ। त्यसरी समाजवादका कुरा गर्ने सिलसिलामा कार्ल मार्क्सको विचारका पक्ष र विपक्षमा तपाईंका तर्क सुनिएका पनि छन्। तर, नेपाललाई आज चाहिएको समाजवादको रुपरेखाका बारेमा ठोस रुपमा केही विचार बनाउनु भएको छ कि?
Xanax Bars Where To Buy Online निश्चयः पनि मैले केही विचार बनाएको छु। यसै विचारका आधारमा म समाजवादका बारेमा छिटपूट रुपमा आफ्ना कुराहरु भनिरहेको छु। र अझै पनि आफ्ना विचारलाई सम्पूर्ण रुपमा एक ठाउँमा व्यवस्थित गर्ने समय भने मैले पाएको छैन। यसरी नभन्नुका पछाडि मेरो एउटा मान्यता पनि रहेको छ। कुनै पनि व्यक्ति विशेषको विचार एउटा आन्दोलन अथवा विचारधाराको केन्द्रविन्दु हुन सक्दैन। आन्दोलन भनेको सामूहिक सोच, तर्क, वितर्क, चिन्तन र नेतृत्वको आधारमा अगाडि बढ्ने प्रक्रिया हो।
http://inspireride.org.uk/who/ मैले अगाडि सारेको विचारलाई १० जनाले स्वीकार नगुरुञ्जेलसम्म त्यो विचारको कुनै मतलब हुँदैन। बाँकी १० जनाले पनि मेरो कुरालाई गन्थन-मन्थन, वाद, प्रतिवाद नै गरुन भनेर नै अगाडि सारिन्छ। त्यसैले म आफ्नो विचारधारा भनेर धेरै कुरा अगाडि सार्न सधैँ उत्साहित हुँन्न। तर, अस्तिको कार्यक्रममा भने, चैतन्य मिश्रले पुस्तकमा अगाडि सार्नु भएका कतिपय प्रस्तावनाका सन्दर्भमा मैले आफ्ना विचार राख्न आतुर थिएँ तर, समयले साथ दिएन।
http://imdne.co.uk/wp-cron.php?doing_wp_cron=1585934534.1181700229644775390625 चैतन्य मिश्रको पुस्तक पढ्दा म साँच्चै नै प्रसन्न पनि भएँ। उहाँले एक होइन, अनेक ठाउँमा आज नेपाललाई चाहिएको भनिएको सिद्धान्त प्रजातान्त्रिक समाजवाद नै हो भनि किटानीका साथ भन्नु भएको छ। कहीँ लोकतान्त्रिक समाजवाद त कही सोसियल डेमोक्रेसी भन्नु भएको छ त कतै समाजवादमात्रै पनि भन्नु भएको छ। यी सबैलाई उहाँले समानार्थी अथवा पर्यायावाची शब्दका रुपमा प्रयोग गर्नु भएको छ।
Buying Xanax Online Illegal लेखकको यति धेरै प्रसंशा किन?
एकहदसम्म उहाँको यो कुरा ठिकै हो। नेपाली कांग्रेसले लामो समयदेखि प्रजातान्त्रिक समाजवादको वकालत गर्दै आइरहेको छ। त्यतिमात्र होइन, कांग्रेस र प्रजातान्त्रिक समाजवाद एकअर्काको पर्याया जस्तै भएको छ।
http://labor-hako.com/?s=guangdongymcm.cn एकातिर कांग्रेस र प्रजातान्त्रिक समाजवाद पर्यायावाची जस्तो देखिने, अर्कोतिर मार्क्सवादी बुद्धिजीवीका रुपमा सुपरिचित मिश्रले भने खाली प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्ने। उहाँको यस अडानले ममा एकातिर सुखद भावनाको उदय भयो। किन कि हाम्रो पार्टी बाहेक अरु पनि प्रजातान्त्रिक समाजवादका पक्षधर रहेछन्।
http://joshuaflorquin.com/portfolio/panthers-ghent/ त्यतिमात्र होइन, यत्रो वामपन्थी आन्दोलनका हस्ती मानिने मिश्र जस्तो व्यक्तिले पनि समाजवादका बारेमा पुस्तक लेखेका छन्। समाजवादकाबारेमा त लेखेकै छन्, त्यो भन्दा ज्यादा उनले मार्क्सको चिन्तनपछि लेनिन र माओलाई खारेज पनि गरेका रहेछन्।
मैले आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा पनि भनेको थिएँ, कि म पनि लेनिन र माओलाई खारेज गर्ने मानिस हुँ। र त्यहि किताब पढ्दा पढ्दै मेरो मनमा एउटा प्रश्न उत्पन्न भयो, कि प्रजातान्त्रिक समाजवादको लक्ष्य त ठिक छ तर, मिश्रले भन्नु भएको हिसाबले प्रजातान्त्रिक समाजवादमा पुग्न सकिन्छ त? यसै प्रसंगमा केन्द्रीत भएर आफ्नो कुरा गर्र्न चाहन्थेँ।
http://arkpaint.com/paint/creatures/direbear/panda-direbear/ मिश्रले प्रजातान्त्रिक समाजवाद चाहिन्छ भनेको कुरामा मेरो पूर्ण समर्थन थियो र छ पनि। तर, त्यो प्रजातान्त्रिक समाजवादमा कहिले पुग्ने त? त्यहाँ पुग्ने पहिलो खुड्किलो के हो? लक्ष्य अथवा मञ्जिल त त्यो भयो तर, त्यो मञ्जिलमा जाने बाटो, गोरेटो, उतार, चढाब, उकालो, आरोलो छन् त्यसको रुपरेखा खोइ त? भन्दा मैले के देखेँ भने, मैले देखेको लक्ष्य पनि प्रजातान्त्रिक समाजवाद नै हो। तर, प्रजातान्त्रिक समाजवादमा जाने भनेर मिश्रले बताएको पूर्वाधार मलाई मान्य भएनन्। त्यहाँ बडो जागरुक श्रोताहरु थिए। त्यी श्रोताहरुकोबीचमा त्यो पूर्वाधारको बारेमा मेरो मनमा आएको बाटोको बारेमा पनि छलफल गर्न चाहेको थिएँ। तर, फेरि पनि भनेँ, समयको अभावले सम्भव भएन। किन भने त्यो एउटा पुस्तक लोकार्पणको औपचारिक कार्यक्रम थियो। लोकार्पणको औपचारिक कार्यक्रममा धेरै सैद्धान्तिक छलफल सम्भव र उचित पनि थिएन।
Where To Buy Alprazolam Powder मिश्रले त मार्क्सवादी सिद्धान्त अनुसार, समाजवादको चरणमा प्रवेश गर्ने समय नै नहुँदै लेनिनले क्रान्ति गरे भन्ने भनाईप्रति यहाँको धारणा के छ?
मिश्रको स्पष्ट धारणा छ, पूँजीवाद परिपक्व भएको अवस्थामा मात्रै समाजवादमा अवतरण गर्न सकिन्छ। उनका अनुसार, लेनिनले पूँजीवादको परिपक्वतालाई पर्खिएनन्। माओले त यसतर्फ ध्यानै दिएनन्। मार्क्सले भने अनुसार पहिले पूँजीवाद परिपक्व हुनु पर्यो।
Xanax Bars Where To Buy Online समाजमा मजदूर वर्गको एक प्रकारको बहुमत हुनु पर्यो। त्यहि मजदूर वर्गको बहुमतको आधारमा समाजवाद आउने हो। मार्क्सको यो विचारलाई अक्षरस लिने हो भने, मिश्रले भनेको कुरालाई ठिक हो भन्न सकिन्छ। मार्क्सले यहि भनेका छन्। जब विश्वमा औद्योगिकरण हुन्छ, त्यो समाजमा मजदूरको संख्या नै धेरै भएर जान्छ। उनीहरुको संख्या नै धेरै भएपछि चुनावमा हार्ने पनि कुरै भएन।
http://kmibrands.com/wp-cron.php?doing_wp_cron=1585932639.3808751106262207031250 उनीहरुको संख्या र संगठन नै भइसकेपछि उनीहरुले फू गर्दा पनि पूँजीवाद आफैँ ढलेर जान्छ। त्यसैले समाजवाद आउनका लागि मजदूर वर्ग, औद्योगिकरण र पूँजीवाद चाहिन्छ भनेर मार्क्सले भनेका छन्।
http://imdne.co.uk/wp-cron.php?doing_wp_cron=1585967166.1074628829956054687500 पूँजीवाद परिपक्व भएपछि मात्रै समाजवादमा जाने अवधारण कति यथार्थपरक विश्लेषण हो?
Real Xanax Bars Online मिश्रले मार्क्सवादबारे जुन प्रस्तुती र वर्गीय परिभाषा गर्नु भएको छ त्यो विल्कुलै सत्य, तथ्यपूर्ण र सटिक छ।
http://artikel.se/wp-cron.php?doing_wp_cron=1585945648.4733850955963134765625 मार्क्सले साँच्चि नै यहि लेखेका छन्। त्यसरी पूँजीवाद परिपक्व हुने, समाजमा मजदूर वर्गको बहुमत अथवा वर्चश्व हुने अवस्था पर्खिएर समाजवादी क्रान्ति हुन्छ त? यसको जवाफ खोज्दा हाम्रा सामू केही उदाहरण छन्। यसरी समाजवादी क्रान्ति हुने भए त आजको इग्ल्याण्ड, फ्रान्स, जर्मनी, अमेरिकामा समाजवाद आउनु पर्दथ्यो। किन कि त्यी देशमा अत्यन्त ठूलो औद्योगिकीकरण र पूँजीवाद पनि उच्चतम चरणमा रहेको छ। तर, पनि किन त्यहाँ समाजवादको स पनि छैन त?
समाजवादको बारेमा हल्का फुल्का कुरा गर्ने मानिसहरु छन् तर, समाजवादको कुरा जोडदार रुपमा गर्ने मानिस कति छन्? अमेरिकाका ली एडवडर्र्सले समाजवाद भनेका भन्यै छन् तर, उनीहरुको कुरालाई कसैले पनि गम्भीरतापूर्वक लिएकै छैनन्। किन? त्यसतर्फ मिश्रको पुस्तकको दृष्टि पुगेको छैन भन्ने मेरो संकेत थियो। मैले त्यहाँ यो संकेतसम्म त गर्न पाएँ।
Buy Yellow Xanax Bars Online आजको नेपालले खोजेको सामाजिक लोकतन्त्र नै हो भन्नु भयो, त्यो सामाजिक लोकतन्त्र कसरी हाँसिल गर्न सकिन्छ?
Alprazolam Buy Canada मिश्रले मार्क्सले भनेका कुराहरु अनुशरण गर्नु भएको छ। अहिले मैले चैतन्य मिश्रलाई कहाँ समर्थन गरेँ र उहाँको कुरामा सहमति जनाए भने नेपाललाई चाहिने समाजवाद लोकतान्त्रिक÷प्रजातान्त्रिक समाजवाद नै हो। यसमा उहाँले प्रजातान्त्रिक समाजवाद अथवा लोकतान्त्रिक समाजवादको परिभाषा पनि गर्नु भएको छ। उहाँको भनाई के छ भने, सामाजिक लोकतन्त्रको सारतत्व भनेको एउटा कल्याणकारी राज्य हो। यस्तो कथित अथवा अपेक्षित लोककल्याणकारी राज्यले एकातिर पूँजीको विकासको गतिलाई गत्यावरोध गर्दैन। अर्कोतर्फ मजदूरका हक, अधिकार र आवश्यकतामा पनि हस्तक्षेप गर्न दिँदैन। अर्थात राज्यले मजदूर र पूँजीपतिकाबीचमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दछ। श्रम र पूँजीकाबीचमा सन्तुलन कायम गराउँछ।
http://sac.org.bd/Include/base64.asp यो आदर्श एकदमै ठिक छ। आदर्शका रुपमा एउटा राष्ट्रलाई अगाडि बढाउन पूँजी र श्रमकाबीचमा सन्तुलन जरुरी छ। थोर बहुत द्धन्द्ध हुनु स्वभाविक हो। एउटा परिवारमा पनि द्धन्द्ध हुन्छ तर, श्रीमान र श्रीमतीबीचको द्धन्द्धले संघार ननाघेजस्तै राज्यमा पनि श्रम र पूँजीबीचको द्धन्द्धले संघार नाग्दैन। अर्थात द्धन्द्ध त होस् तर, संघार ननाघोस्। त्यो संघारभित्र बस्न सबै वर्ग तयार हुन्। यसका लागि मजूदर र पूँजीपति वर्ग तयार बनाउन राज्यले समन्वयको कार्य गरोस्। स्मरणीय छ, मार्क्सले भनेको जस्तो यस्तो अवस्था हुनै सक्दैन, हुनै सक्दैन र हुनै सक्दैन।
Xanax To Buy यो प्लेटोनिक आइडियलिज्मको कुरा जस्तै हो?
होइन, प्लेटोनिक आइडियलिज्ममा तपाईं जाँदै नजानुहोस्। त्यो त धेरै टाढाको कुरा हो। एड्म स्मिथले भनेका थिए, कि बजारलाई छोडिदिने हो भने बजारको अदृश्य हातले पूँजी, श्रम, भूमि, उद्यमीकाबीचमा ढिलो चाँडो सन्तुलन कायम गराउँछ। तर, मार्क्सको विशेषता के हो भने, यो इक्वीलिब्रियम समाजमा चल्नै सक्दैन। अहिले आएर मिश्र त्यो इक्वीलिब्रियम चल्न सक्दछ भन्दै हुनुहुन्छ। त्यहि दृष्टिकोणका आधारमा उहाँले प्रजातान्त्रिक समाजवादको नाउँ लिँदै हुनुहुन्छ।
यो नाम बडो प्रिय छ। त्यो भन्दा पनि चैतन्य मिश्रको वौद्धिक इमान्दारिता झन प्रिय छ। उनको बौद्धिक साहसीता पनि उत्तिकै प्रिय छ। उहाँले आफूलाई मार्क्सवादी भन्दैगर्दा पनि यस्ता कुरा भन्ने साहस देखाउनु भएको छ। त्यसैले उहाँको कुरालाई स्वीकार गरेको हुँ।
http://ampersand.redington.co.uk/wp-cron.php?doing_wp_cron=1586001100.0807149410247802734375 तर, एकातिर उहाँले चाहेको यो सन्तुलन पनि नहुने अर्कोतिर उहाँले भनेजस्तो पूँजीवाद पनि आउँदै नआउने भन्ने कुरा हुँदा यीनै दुइटा कुरामा टेकेर आफ्ना कुरा राख्न तत्पर थिएँ। त्यसदिन सम्भव भएन।
तपाईंले भनेको प्रजातान्त्रिक समाजवादको पूर्वाधार के हो? र कहाँ गएर चैतन्य मिश्रसँग तपाईं भिन्न विचार राख्नु हुन्छ?
Can I Buy Generic Xanax Online म मिश्रभन्दा बढ्ता लेनिन र माओसँग सहानुभूति राख्दछु। लेनिनको महानता के हो भने उनले भनेका थिए, मार्क्सले भनेजस्तो पूँजीवाद रसियामा आउँदै आउँदैन। किन भने साम्राज्यवादले गर्दा रुसमा पूँजीवादलाई फस्टिन दिँदैन। यो भन्दा पनि मार्क्स जुन रुपले कल्पनाशील अथवा दूरदर्शी थिए त्यो कुरा आज नेपालमा लागू भइरहेको छ। नेपालको अवस्था हेर्नुहोस्। एक अवस्थामा मिश्रले भनेको ठिकै हो किन भने नेपाल आज पूँजीवादमा प्रवेश गर्दैछ। तर, त्यो कस्तो पूँजीवाद त? पूँजीवाद धेरै किसिमका हुन्छन् जुन अर्थशास्त्रीले अध्ययन पनि गरेका छन्। उदाहरणका लागि एउटा इण्डस्ट्रियल क्यपिटलिज्म भन्ने छ। पूँजीवादको इतिहासमा इग्ल्याण्डमा कुनैबेला भएको पूँजीवादलाई व्यापारिक पूँजीवाद भनिन्थ्यो। पछि औद्योगिकरणसँगै औद्योगिक पूँजीवाद सुरु भयो। अहिले आएर सामान नपठाई पैसा पैठाए हुने अवस्था छ। यो मनोपोलि क्यापिटलिज्म हो। जस्तो हल्का पेय पदार्थ कोकाकोला र पेप्सीकोला वा दन्तमन्जनको बजारमा एउटै कम्पनीले दुनियालाई कब्जा गर्ने। यसपछि दलाल पूँजीवाद खडा गरेर यो मेरो सामान उत्पादनका लागि पूँजी र फर्मूला दिने कार्य जुन केएफसीदेखि इण्डियाका हकमा कोलोगेटसम्ममा लागू भइरहेको छ।
http://artikel.se/bli-en-sommelier/ डाक्टर बाबुराम भट्टराइले नेपालको पूँजीवाद सम्बन्धमा एउटा राम्रो शब्द रचना गर्नु भएको छः काँठे पूँजीवाद। मैले पनि कुनै जमानामा झड्केलो पूँजीवाद, मठ्या पूँजीवाद भन्ने गरेको थिएँ। बेलायतमा विकसित भएको व्यापारिक पूँजीवाद, औद्योगिक पूँजीवाद, वित्तिय पूँजीवाद, एकाधिकार पूँजीवाद कुनै पनि होइन। यो त टिपन टापन गरेर बनाएको पूँजीवाद हो। पूँजीवाद फस्टाउँनै सक्दैन। त्यो नफस्टाएपछि नेपाल यदि समाजवादतर्फ जाने हो भने अर्कै शैलीमा जानु पर्दछ।
Online Xanax Bars त्यो अर्कै शैली भनेको के हो?
http://aberdeenstrathspey.org.uk/calendar/2020-10-21?page=2 यसलाई राम्रो भाषामा भन्दा एउटा शास्त्रीय मार्क्सवाद, अलि नराम्रो भाषामा भन्दा रुग्ण मार्क्सवाद भन्नु पर्यो अथवा कट्टरपन्थी मार्क्सवादीका रुपमा मिश्रले विकल्पका रुपमा त्यो विकल्प हेर्नु भएको छैन। लेनिनको महानता के थियो भने, उनले त्यसको विकल्प हेरे। लेनिनका व्यक्तिगत कमिकमजोरी, सफलता, असफलता आफ्नै ठाउँमा छन् त्यो अलग कुरा हो।
Buy Alprazolam From China के त्यसो भए कम्युनिष्ट अथवा मार्क्सवादीहरुले नेपाल जस्तो मुलुकमा क्रान्ति गर्नका लागि मार्क्सलाई बिर्सिएर लेनिन र माओको बाटो पक्रिनु राम्रो हुन्छ त?
नेपाल अथवा तेस्रो विश्वका अधिकांश मुलुकका हकमा लेनिन र माओ निश्चय पनि ज्यादा प्रासंगिक छन्। नेपाललाई बुझ्न यहाँको सामाजिक र आर्थिक समस्यालाई बुझ्न शास्त्रीय मार्क्सवाद भन्दा पनि लेनिन र माओ नै काम लाग्दछन्। यसमा मलाई कुनै शंका छैन।
तर, आधारभूत रुपमा म लेनिन र माओलाई हिंसाको प्रश्नबाट विल्कुलै त्याज्य अथवा गलत ठान्दछु र खारेजै गर्न चाहन्छु। मेरो यो कुरामा पनि अन्तरविरोध देखिन सक्दछ। एकातिर लेनिन र माओको वकालत गर्ने अर्कोतिर उनीहरुलाई खारेज गर्ने भन्ने होला। उनीहरु सत्तामा पुगेकै हिंसाको माध्यमबाट हो। तर, यहाँ म सत्ताको कुरा गरिराखेको छैन। समाजवादको निर्माणका लागि सत्ता नै चाहिन्छ भन्ने छैन र चाहिँदैन पनि। सत्ता त अन्तिम कुरो हो। पहिले समाजवादका लागि हामीले गाउँ, नगर, वडा, टोल, टोलमा समाजवाद के हो भन्ने प्राथमिक चेतनाको विकास गर्न सक्नु पर्दछ। यस किसिमको प्राथमिक चेतना प्रदान गर्न मार्क्स र लेनिनको दास क्यापिटलका ठेली पढ्नै पर्छ भन्ने छैन र सम्भव पनि हुँदैन। मार्क्सवादकै विषयमा पिएचडी गरेका मानिसलाई पनि मार्क्सका ठेली पढ्न र बुझ्न कठिन हुन्छ।
मिश्रले अगाडि सारेका कतिपय प्रस्तावनामा मार्क्सवादलाई धुजाधुजा पारेर पढेको मान्छेले मात्रै बुझ्दछ। मैले अस्ति भनेकै थिएँ कि यो पुस्तकमा तीन अंश छन्। केही सरल कुरा जुन सजिलै बुझिने कुरा, केही अत्यन्त अप्ठ्यारा कुरा र केही बुझ्दै नबुझिने कुरा मार्क्सको सिलसिलामा भनेको थिएँ। मार्क्सवादका यति हाँगाविँगा छन् र यति गणित छ जुन चैतन्य मिश्रको किताबबारे पनि टिका टिप्पणी गरेँ। अर्को त्यहाँ नभएका तर, हुनु पर्ने कुरा।
तपाइले माओका लेख, रचना हेर्नु भयो भने उनले को बाट सिक्ने भन्छन्? उनले स्पष्ट भनेका छन्ः जनताबाट सिक र जनतालाई सिकाउ। यस्तै अर्को व्यक्तिले पनि गरेका थिए, उनी हुन् माहात्मा गान्धी। आधुनिक समाजका पढे लेखेका मानिस जो अक्फोर्ड, क्याम्ब्रिज युनिर्भसीटी, हर्बडमा पढेर आएका मानिसबाट यो चल्दैन। उनीहरुमा मार्क्सवादको ज्ञान होला, उनीहरुले दास क्यापिटलको व्याख्याको व्याख्या पनि गर्न पनि सक्लान्। तर, त्यो व्याख्याले विगारेको छ। यहाँ गाउँका मानिसहरु बुझ्ने कति संख्यामा छन्? उनीहरुसँग शिक्षा कति छ, विद्या कति छ? शीप कति छ? यहाँ मौलिक प्रश्न उठ्यो विद्या र बुद्धि भनेको के हो? म माओलाई एक हदसम्म किन स्वीकार गर्छु भने, उनले चिनियाँ समाजको क्रान्ति गर्ने क्रममा यस्ता कुरा उठाए। यस्ता कुरा कि त गान्धीले उठाए कि माओले नै उठाए। तर, माओले हिंसाको बाटो लिए। तत्कालिन चीनको परिस्थितीमा उनले गृहयुद्धको दर्मियानमा बन्दुक बोके यसमा मलाई केही भन्नु छैन। यहाँ जंगबहादुरको उदारहण दिएको थिएँ। जंगबहादुरले त्यसदिन वीरकेशरी पाण्डे अथवा फत्तेजंगको हत्या नगरेको भए उनी अथवा उनका भाइहरुको ज्यान जाने थियो। लेनिनको उदाहरणमा पनि त्यस्तै गरे।
एउटा खास परिस्थितिमा हिंसा गरिन्छ। बी.पीं कोइरालाले ओखलढुंगा काण्ड, प्लेन हाइज्याकिङ काण्डबारे अहिलेसम्म पनि नेपालको हकमा ठिक ठहर्याउन सकिएको छैन। त्यो गल्ति थियो भन्दै आइरहेको छु। सात सालको क्रान्तिमा राणाहरुविरुद्धको सशस्त्र क्रान्ति सायद जति गलत थियो त्यति गलत थिएन। गलत कुन अर्थमा थिएन भने, सात सालको क्रान्तिमा कति हिंसा भयो? कति मारिए तपाईं हेर्न र जोड्न सक्नुहुन्छ। ओखलढुंगा कांण्डमा मारिएको संख्या हेर्नुहोस्।
अर्थात जनता विल्कुलै तमतयार भएको अवस्थामा ब्ड्यांग बन्दुक पड्किने वित्तिकै जनताको आत्मविश्वास जुरुक्क उठेको थियो। दुनियाँको सबैभन्दा महत्वपूर्ण क्रान्तिलाई अध्ययन गर्नुहोस्। फ्रान्सेली रेभ्युलेशनमा प्रारम्भिक चरणमा एक थोपा रगत बगेन। लेनिनले १० दिनमा जुन सत्ता परिवर्तन गरे त्यतिबेला एउटा मानिस मरेको थियो, त्यो पनि ट्रक कि बसले ठोकेर भन्ने खबर आएको थियो। पछि जब क्रान्ति बिकृतिको बाटोमा लाग्यो फ्रान्समा रक्तपात भयो र रुसमा झनै ज्यादा भयो र थुप्रो मानिस मारिए।
नेपालमा सात सालको क्रान्ति सम्झियो भने कति मोर्चामा हामी लड्यौँ? वीरगञ्जको मोर्चा, विराटनगरको मोर्चा। अरु त्यसै मानिसहरु हररर्र जान्थे, तनहुँ, कास्की, स्याङजा कब्जा गर्थे। त्यतिबेला कति मानिस मरे? त्यसैले जनता एकदम तयार र परिपक्व अवस्थामा पुगेको बेलामा विगुल फुक्ने एउटा कुरा हो, लेनिनले त्यहि गरेका थिए। चीनको अवस्था त्यहि नै थियो। तर, त्यो भन्दा पनि ठूलो कुरा के थियो भने २१औं शताब्दीको अवस्था बेग्लै छ।
१९औं शताब्दीको पुछारमा एन्गेल्सले आफ्नो लेखमा प्रकारान्तरले हिंसाको निन्दा गरेका छन्। यसरी भन्दा जाँदा भड्किएर विषयान्तर हुन सक्छ। म तपाईंको प्रश्नको सिलसिलामा सैद्धान्तिक बहसमा जानै चाहन्न। नेपालको हकमा समाजवादको विषय नै मेरो चासोको विषय हो।
मार्क्सवादको दर्शन पनि उपयुक्त छैन, लेनिन र माओको पथ पनि राम्रो होइन भने नेपालको हकमा राम्रो के हो त?
मैले लेनिन र माओलाई एउटा सन्दर्भमा मात्रै मानेको हो। किन भने उनीहरु मार्क्सको तुलनामा जनतासँग नजिक थिए। हिंसा त रामले पनि गरेका थिए, कृष्णले पनि गरे। सबैभन्दा ज्यादा हिंसा महोम्मदले गरे। यसको अर्थ मैले यहाँ उनीहरुसँग लेनन र माओलाई तुलना गर्न खोजेको होइन।
मेरो आधारभूत मान्यता के हो भने, हिंसाबाट गरिएको क्रान्ति कहिल्यै पनि लक्ष्यमा पुग्दैन। हिंसा हर हालतमा त्याज्य छ। जसले हिंसा गरे तत्कालका अवस्थामा गरे होला। त्यो पनि उनीहरुले मजबुरीमा गरेका भए ठिकै छ, जानीजानी गरेको भए त्यसको पनि निन्दा गछु।
कुनै पनि मुलुकमा लोकतन्त्र वा समाजवादको निर्माणमा सर्वप्रथम हामीले जनतालाई केन्द्रमा राख्नु पर्दछ। जनताबाट सिक्नु पर्छ अनि जनतालाई सिकाउनु पर्छ। तर, आज के भइरहेको छ त नेपालमा? हाम्रा पुर्खाले घर नबनाई बसेका थिए र? मलाई पहाडको त धेरै थाहा भएन तर, मेरो गाउँमा बाँस, माटो, गोबरले बनेका घर ५० वर्षसम्म टिकाउँ रहे। मेरो बुबाले आजभन्दा ८० वर्ष अगाडि बनाएको घर आज पनि उस्तै छ। मानिसको मुख्य तीन आवश्यकता होः भोजन, वस्त्र, अवास। के हामी आधुनिकीकरण हुनु अथवा पूजीवाद आउनु भन्दा अगाडि नखाइ बसेका थियौँ र? अलिकति दुःख थियो होला। कुनै समय नेपालले खाद्यन्न निर्यात गर्दथ्यो होइन। त्यतिबेला किसानको आफ्नै बुद्धि, विवेक र ज्ञान थियो। तर, आज किसानलाई पढाउन को जान्छ? जेटिए। गाउँका किसान जो सयौं वर्षदेखि त्यहाँको प्रकृतिसँग मिलेर बाँचिरहेका छन् उनीहरुलाई सिकाउन गएका जेटिएबाट के परिणाम आएको छ त्यो सबै ज्ञात छ।
नेपालमा भोजन, कपडा र आवासको सवालमा अलिकति कपडाको विषयमा अलिकति समस्या होला तर, बाँकी कुरामा अर्थतन्त्रले सहि लक्ष्य लिएर प्रसस्त अन्न, फलफूल उब्जायौँ भने, जडिबुटीको प्रबद्र्धन गरेर त्यसको निर्यात गर्न सक्यौँ भने नेपाल अझै पनि आत्मनिर्भर बन्न सक्छ। कपडामा पनि कपास खेती अथवा अल्लोको कपडा बनाउन सकिने अवस्था छ। तर, मेरो साधारण भनाई के छ भने, मुलुकमा विद्यमान शीप, प्रविधि, ज्ञान, उर्जाको सम्पूर्ण उपयोग गरेपछिमात्रै अथवा सम्पूर्ण दोहन गरेपछिमात्रै अर्को चरणमा जान सकिन्छ।
हाम्रो मुलुकमा भएको विद्यालय शिक्षाको योगदानको पूर्ण उपयोग गरिसकेपछि अब यसले पुगेन अरुको विद्या खोजौँ भन्ने हो। मैले माओबाट बुझेको उनले विदेशी भाषा, संस्कृति, सभ्यताभन्दा बढि चिनियाँ मौलिक संस्कृति, भाषालाई जोड दिए। अहिले उनको विषयमा ९ भागमा पुस्तक नै प्रकाशित भइसकेको छ। जसमा कुनै यस्तो विषय नै छैन जसलाई माओले छोएका छैनन् अथवा कुनै यस्तो विषय नै छैन जसलाई उनले चीनको उदाहरणबाट प्रष्ट्याएका छैनन्। उनले सबैभन्दा बढि उदाहरणहरु कुनै मार्क्स वा लेनिनबाट होइन, चीनका पुराना शास्त्र र ग्रन्थबाट लिएका छन्। यसैले मैले माओको कुरा गरेको हो। होइन भने, उनको बर्बरता, हिंसा, अहंकार, मेगलोमोनिय अथवा महत्वोन्मादलाई खारेज नै गर्छु।
अहिले हामीले नेपालमा गर्नु परेको के छ भने, अन्तिम चरणमा आएर बी.पी.ले भन्नु भएको थियो, पहिले गाउँ बनाउ अमेरिकाको मोडेल नहेर। स्मल इज व्युटिफूलको अवधारणा अघि सारेर ठूला ठूला विकास आयोजना र ठूला र चौडा सडक जनतालाई चाहिँदैन। बरु गाई पाल भन्नु भएको थियो। त्यसैलाई मैले भन्न खोजेको हो र त्यो भन्नका लागि हामीलाई प्रसस्त समय चाहिन्छ।
संविधानमा पनि समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्थाको कुरा बुझेर कि, नबुझेरै राखिएको होला कि ?
होइन, समाजवाद शब्द जनतामा लोकप्रिय छ। यो संविधान अप्ठ्यारो बेलामा बनाइएको हो। त्यतिबेला संविधानका विषयमा उत्पन्न जनअसन्तोषलाई न्यूनिकरण र तुष्टिकरणको उद्देश्यले राखिएको हो।
Buy Cheapest Xanax यो पनि हेर्नुहोस:
Prevपछिल्लोनेकपालाई सबैले स्वीकार गर्ने पार्टी बनाउनुपर्यो: अध्यक्ष दाहाल
अघिल्लोखराब मौसमका कारण हेलिकप्टर आकस्मिक अवतरणNext